Don’t miss ICT.com.mm offers for these GADGETS. ~ The ICT.com.mm Blog
Don’t miss ICT.com.mm offers for these GADGETS.
အစဉ်အမြဲ Power Supply ရှိနေစေချင်တဲ့သူတွေအတွက် UPS, Car Charger, Power Bank, Inverter နဲ့ Wireless Charger မျိုးစုံကို အရမ်းတန်တဲ့ဈေးနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ အထူးလျှော့ဈေးအဖြစ် #HOCO brand ကို 30% အထိ Discount ချပေးနေပါပြီနော်။
Order now » https://bit.ly/3eimvNm
ငွေကျပ် ၅၀,၀၀၀ အောက် IT ပစ္စည်းအစုံအလင်ကို တစ်နေရာတည်းမှာ စုစည်းပေးထားပါတယ်နော်။ ဒီနှစ်မကုန်ခင် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပေးချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ဒီPromotion မှာပဲရမယ့်ဈေးတွေမို့ မြန်မြန်လေးအော်ဒါတင်ထားလိုက်ပါဦး။
ပြီးတော့ အမျိုးအစားပေါင်း ၃၈၃ ခုတောင် ဆိုတော့ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ရမယ့်အပြင်တန်လဲတန် တော့ လိုအပ်တာလေးတွေ Budget မထိခိုက်ပဲဝယ်လို့ရတာပေ့ါနော်။
Order now » https://bit.ly/3ed2BmV
#ShopICT #Myanmar #Yearenddeals2021 #biggestsale2021 #Electronics #under50k #hoco
Older Enjoy Christmas carols and holiday music vibe with the best audio devices